Acrocyanosis - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Acrocyanosis
Acrocyanosis ဆိုတာ ခြေထောက်နှင့် လက်တို့ရှိ အရေပြားကို ထောက်ပံ့ပေးသော သွေးကြောများ တွင်ဖြစ်တဲ့ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသွေးကြောငယ်လေးများဟာ ခြေထောက်နှင့် လက်တို့ရှိ အရေပြားဆီသို့ လိုအပ်သော အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင်များ သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေပြားသို့ သွေးစီးဆင်းမှု မလုံလောက်ပါက အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင်များရရှိမှု နည်းပြီး အရေပြား အရောင်မှာ နက်ပြာ သို့မဟုတ် ခရမ်းပြာရောင်သို့ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။ ထိုအခြေအနေကို Cyanosis ဟုခေါ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ခန္တာကိုယ် တစ်နေရာရှိ ပြင်းထန်ရောဂါ တစ်ခုခုကို ညွှန်းဆိုနေတတ်ပါသည်။ ဥပမာ နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အသားတစ်ရှူး ဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခု ရှိခြင်းကြောင့် ပြတဲ့ လက္ခဏာတစ်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Acrocyanosis က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ ရှားတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Acrocyanosis ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ရောဂါဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်နဲ့ လက်များ အေးစက်နေခြင်း၊ အပြာရောင်သမ်းခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ ချွေးပြန်သကဲ့သို့ စိုစွတ်နေတတ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းများ လည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အအေးဒါဏ် နှင့်ထိတွေ့ပါက ပိုဆိုးလာတတ်ပြီး အနွေးဓါတ်ပြန်ရပါက ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ နာကျင်မှု မရှိတတ်ပါဘူး။ ရောဂါဖြစ်သော လက် သို့မဟုတ် ခြေထောက်ရှိ သွေးကြာများ ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောကြောင့် သွေးခုန်နှုန်းများ မှာပုံမှန်ရှိတတ်ပါတယ်။
အရေပြားသို့ သွေးစီးဆင်းမှု မလုံလောက်ပါက အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင်များရရှိမှု နည်းပြီး အရေပြား အရောင်မှာ နက်ပြာ သို့မဟုတ် ခရမ်းပြာရောင်သို့ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။ ထိုအခြေအနေကို Cyanosis ဟုခေါ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Acrocyanosis ဟုခေါ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Acrocyanosis ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Acrocyanosis ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Acrocyanosis ကို အဓိကအားဖြင့်ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း တို့ဖြင့် အတည်ပြုပါသည်။ သွေးခုန်နှုန်း စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အခြားရောဂါများဖြစ်ပါက သွေးခုန်နှုန်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများ ကိုတွေ့ရပြီး Acrocyanosis တွင်တော့ သွေးကြာများ ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောကြောင့် သွေးခုန်နှုန်းများ မှာပုံမှန်ရှိတတ်ပါတယ်။ Pulse oximetry စက်ကလေးဖြင့် သွေးခုန်နှုန်းသာ မက သွေးထဲတွင် အောက်စီဂျင် ပမာဏ မည်မျှရှိသည်ကို သိနိုင်ပါသည်။ Raynaud’s phenomenon နှင့် ကွာခြားချက်မှာ ဒီရောဂါမှာ Cyanosis အရေပြားများပြာနှမ်းခြင်းဟာ ဆက်တိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခြားသော အရေပြားပြောင်းလဲမှုများ၊ နာကျင်မှု နှင့် အနာဖြစ်ခြင်းများ မတွေ့ရပေ။ Capillaroscopy နှင့် အခြားသော ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုများ ကို အသားတစ်ရှူး ဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခု ရှိမရှိ ခွဲခြားလိုသော အခါပြုလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဓါတ်မှန် နှင့် ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုများကို ရောဂါ အခြေအနေ ပြင်းထန်မှ သာပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
Acrocyanosis ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Acrocyanosis ကိုကုသရာတွင် အဓိကမှာ ရောဂါဖြစ်သော ခြေထောက်နှင့် လက်ကို အအေးဒါဏ်ကာကွယ်ရန် နှင့် ခြောက်သွေ့အောင်ထားရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူဓါတ်ပေးသော ရှူးဖိနပ်များ၊ ပါးလွှာသော Polypropylene အနားကွပ် ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင်ထားရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် အခြားသော ကုသမှုများ မလိုအပ်ပေ။ ရောဂါအခြေအနေ အရမ်းပြင်းထန်ပါက ဆက်တိုက် သွေးကြောကျုံ့ခြင်းကို ကုသရန် Sympathectomy ခေါ်သော ခွဲစိပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Acrocyanosis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Acrocyanosis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Acrocyanosis. https://www.ahni.com/Specialties/Foot+and+Ankle/Articles/Common+Disorders/Acrocyanosis.html. Accessed October 30, 2017
Acrocyanosis. https://www.medigoo.com/articles/acrocyanosis/. Accessed October 30, 2017
Acrocyanosis. https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acrocyanosis. Accessed October 30, 2017